आर्थिक अभावकै कारण कलाकार निशाको अवस्था नाजुक, सहयोगको लागि गायीका लक्ष्मीले गरिन अपील — onlinedabali.com
आर्थिक अभावकै कारण कलाकार निशाको अवस्था नाजुक, सहयोगको लागि गायीका लक्ष्मीले गरिन अपील
काठमाडौँ । कालकार निशा घिमिरेको अवस्थामा नाजुक हुँदै गएको छ । भारतमा दुर्घ’टनामा परी घाइते निशाको उपचार अभावमा स्वास्थ्य अवस्थामा नाजुक बन्दै गएको हो ।
नेपाली कला क्षेत्रकी आशा लाग्दो पात्रको रुपमा अगाडि आएकी निशा कलाकारितमा उच्च शिक्षाको क्रममा भारतमा दुर्घटनामा परेकी थिइन् । उपचार महंगो र घरका आर्थिक अवस्थामा कमजोर भएकै कारण निशाको उपचारमा समस्या छ ।
ललितपुर स्थायी घर भएकी निशाले एक दर्जनभन्दा बढी म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेकी छन् । मोडलिङ सिक्न गएको दुई महिनामा भारतको डेरादुनमा कार दु’र्घटना भएको परिवारले जनाएका छन् ।
एउटा सानो झुप्रोमा निशाले मृत्युसँग लडिरहेकी छन् । देशको गहनाको रुपमा हेरिने कलाकारको आर्थिक अभावकै उपचार हुन नसक्नु दुःखद् हो ।
यसैबीच गायीका तथा मोडल लक्ष्मी आचार्यले निशाको उपचारमा सहयोगको अपील गरेकी छन् । उनले आर्थिक अभावकै कारण देशको गहना कलाकारको यस्तो अवस्थामा देख्दा आफूलाई निकै दुःख लागेको बताइन् ।
गायीका आचार्यले देशमा लाखौं कलाकार भएपनि कसैले पनि सहयोग नगरेको बताएकी छन् । उनले एउटा कलाकारले १० हजारको हिसाबले सहयोग उठउने हो भने निशाको उपचार हुने बताएकी छन् । नेपाली कलाकार अर्कालाई समस्या पर्दा कहिलै वास्ता गर्दैनन् भन्दै लक्ष्मीले यसलाई दुःख लाग्दो कुरा भएको बताउँछन् ।
सबै कलाकारहरुले हातेमालो गरेर निशालाई बचाउन अपील समेत लक्ष्मीले गरेकी छन् ।
लक्ष्मीले सामाजिक संजालमा लेखेकी छन्ः नेपालका लाखौं कलाकार के हेरेर बसेका छन् ? नेपालमा यत्रो कलाकार छन् तर सहयोग गरेको कतै देखिँदैन । सम्पूर्ण कालाकाहरुले एक अर्कालाई परेको समस्यामा कहिल्यै वास्ता गर्दैनन् । सम्पूर्ण कलाकारहरुले १० हजारको दरले सहयोग उठाउने हो भने निशाको सहज रुपमा उपचार हुन्छ । तर, नेपाली कलाकारहरुले एक अर्कालाई समस्यामा पर्दा कहिल्यै वास्ता गर्दैनन् । यो एकदमै दुःख लाग्दो कुरो छ । सबैले हातेमालो गरेर निशालाई बचाऔं ।
सहयोगको अपील गर्दै लक्ष्मीले फेरि लेख्छिन्ः नेपाली कला क्षेत्रमा जम्दै गरेको एउटा नाम हो निशा घिमिरे । उनको यो अवस्था देख्दा निःशब्द छु । कलाकारितामा उच्च शिक्षाको क्रममा भारतमा सवारी दुर्घ’टनामा परी उपचारको अभावले यो अवस्थामा पुगेको देख्दा निकै दुःखी छु । केही दिन पहिले टिकटकमा उहाँको यस्ता नाजुक अवस्था देख्दा मेरो मात्र होइन देख्ने जो कोहीको आँखा रसाउछ होला सायद । राष्ट्रको गहना निशा उपचारको अभावमा जीवनमरणमा दोसाँधमा छन् । मेरो अनुरोध हाम्रो सानो सहयोगले निशा पुरानै अवस्थामा फर्किन सक्छिन् । त्यसैले सहयोगी मनहरुले सनसाइज बैंकमा निशाका बुबा प्रेम प्रसाद घिमिेको नाममा रहेको खाना नं. ०८४०६१३६१३२०५००१ मा सहयोग गर्न सक्नु हुनेछ । निशाका बुबाको मोवाइल नम्बर ९८५१२३८९५१ मा सम्पर्क सक्नु हुनेछ ।